Tilmaamaha Caafimaadka ee La Daboolayo Kahor Fasaxyadaada Morocco
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Tilmaamaha Caafimaadka ee La Daboolayo Kahor Fasaxyadaada Morocco
Jebinta Wararka Safarka • Moroko News • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Hagaag, markaa haddii aad horay u buuxisay boorsooyinkaaga oo aad u goosatay duulimaadkii aad ku tagtay Marooko waxaadna diyaar u tahay inaad waqti tayo leh ku qaadato dalkan qalaad ee qurxoon, ka dib ku hay ilbiriqsi. Si aad u sameyso Fasaxyada Morocco qaas ah oo la xasuusto, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhowr tilmaamood oo caafimaad maxaa yeelay haddii aad xanuunsatid intaad safarka ku jirtid, markaa ma awoodi doontid inaad wax ku raaxaysatid. Marka, kahor intaadan diyaaradda aadin Morocco hubi inaad raacdo talooyinkan caafimaad ee ay soo jeediyeen Memphistours.
Hel Caymiska Safarka
Kahor safarka, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in caymiskaaga guud ee meelaha caymiska safarka sidoo kale. Sababtoo ah inta badan kiisaska, caymiska ma dabooli doono qaybaha caymiska safarka. Marka, haddii caymiskaagu uusan ku jirin caymiska safarka, markaa waa inaad heshaa mid kahor booqashada Morocco. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku raaxeysato nashaadaadyo xiisaha leh sida baaskiil wadista ama ku lugeynta Morocco, markaa waxaad u baahan tahay caymiska safarka. Intaad qaadaneysid caymiska safarka hubi in caymiskaaga cayiman uu leeyahay qodob ka bixitaan deg deg ah.
Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad booqato dhakhtarkaaga kahor intaadan safarka u aadin Marooko maxaa yeelay waxaa jira cuduro kulaylaha qaar ka mid ah oo aad si fudud u qaadi karto haddii aadan horay u helin talaal. Socdaalka Morocco, talaalada lagu taliyay waxaa ka mid ah cagaarshowga A iyo B, MMR, tiifowga, raabiyada (gaar ahaan haddii aad banaanka joogi doontid) iyo teetanada. Si kastaba ha noqotee, malaria si fudud ugama heli doontid dalka Marooko, sidaa darteed waad iska ilaalin kartaa qaadashada tallaallada cudurka duumada. Marka laga reebo tallaaladaas, waa inaad hubisaa inaad ku soo xirto daawooyinka lagama maarmaanka ah xirmadaada gargaarka degdegga ah ee safarka.
Fasaxyadaada Marooko, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato caadooyinkaaga cunidda. Kama iibsan kartid miro ama waxyaabo kale oo cunitaan ah kuwa iibiya wadada hareeraheeda maxaa yeelay heerkulka daran ee Marooko ayaa burburin kara cunooyinka taasna waxay si xun u saameyn kartaa nidaamka dheef shiidka ee dadka safarka ah maxaa yeelay caado uma aha inay cunaan cuntada noocaas ah. Intaas waxaa sii dheer, ha cunin wax ceyriin ah adiga oo aan si sax ah loo maydhin, loo fiiqin loona kariyo. Waa inaad had iyo jeer isku daydaa inaad wax ku cunto jawiga nadiifka ah ee hudheelkaaga ama makhaayado wanaagsan oo ku yaal Morocco oo keliya. Had iyo jeer cun cunno cusub oo diyaarsan oo kulul markaad safreyso.
Waa inaadan ku cabbin biyaha tubbada tooska ah ee Marooko maxaa yeelay biyaha maxalliga ahi ma aha kuwo saafi ah oo nadiif ah. Waa inaad cabto biyo kadib nidaamka nadiifinta saxda ah kaliya. Magaalooyinka waawayn, waxaad si fudud uga heli kartaa dhalada biyaha sumadda leh oo aad u nadiif ah una fiican safrayaasha. Marka, waa inaad had iyo jeer ilaalisaa biyaha dhalada kujira intaad ku safreyso magaaladan quruxda badan.
Si taxaddar leh u dabaasho
Waxaa jira goobo badan oo biyo ah iyo xeebo kala duwan oo ku yaal Marooko, laakiin waa inaadan ku dabaalan mid ka mid ah goobahan biyo-mareenka ah ee Morocco iyadoon baaritaan sax ah la sameyn. Taasi waa sababta oo ah meydadka biyaha Marooko bakteeriyada cudurka qabta waxaa xilligan loogu magac daray dulinka cudurka 'schistosomiasis'. Waa mid ka mid ah dulinleyda ugu halista badan ee jirka ku sababi kara cuduro fara badan oo xitaa dhaawici kara xubnahaaga gudaha.
Waad ku dabaalan kartaa meydadka biyaha cusbada leh ee ku yaal Marooko maxaa yeelay dulinyaashani kuma noolaan doonaan meydadka biyaha cusbada leh, laakiin waa inaad hubisaa inaad hubiso heerka wasakhda ee jirka biyaha ka hor intaadan ku dabaalan. Intaa waxaa sii dheer, waligaa ha iibsan waxyaabaha badda dhinaceeda yaal, gaar ahaan qashin-qubka.
Marooko oo ku taal wadan aad u nabdoon oo aysan ka dhicin weeraro badan oo argagixiso. Laakiin, nabadgelyadaada guud, waa inaad ka fogaataa meel kasta oo la xidhiidha dawladda Mareykanka ama dhaqanka reer galbeedka ee Morocco maxaa yeelay goobahan waxaa inta badan bartilmaameedsada bulshada maxalliga ah. Waa inaadan booqan naadiyada, naasiinooyinka ama maqaayadaha ka adeegta aalkolada Morocco.
Marka, haddii aad rabto inaad ka dhigato fasaxyadaada Marooko kuwo sii dhacaya oo xiiso leh, markaa waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad la socoto dhammaan tilmaamaha caafimaadka ee aan kaga wada hadalnay boostadan. Haddii aad seegto mid ka mid ah talooyinka caafimaadka ee laga wada hadlay, markaa ma awoodi doontid inaad ku raaxaysatid fasaxaaga sida aad qorshaysay. Marka, haddii aadan rabin inaad ku dhammaato qolka gargaarka degdegga ah ee isbitaalka fasaxaaga ka dib, ka dib raac tilmaamaha caafimaadka oo ammaan noqo.